हेर्न सकिएन, देखाउन बन्द गरियोस् सरकार :: NepalPlus
लक्ष्मण देवकोटा२०७७ माघ २१ गते १२:५१
जात्रा बल्ल शुरु भएको छ नेपालमा । सडकमा छन् सबै । प्रतिपक्ष सडकमा । सत्तापक्षकै माधव नेपाल र प्रचण्ड सडकमा । वकिल सडकमा । नागरिक समाज सडकमा । कवि सडकमा । लेखक नाटककार सब सडकमा । हुँदाहुँदा सरकार पनि सडकमा । हुँदाहुँदा नारानहिटीमा दरबारको पटांगिनीमा मुख्तियारको गर्जन कुरेर बसेका कान्तिपुर नगरीका मानिसहरुलाई झस्काउँदै सेनाका ट्याँकर पनि रातबिरात सडकमा ।
प्रतिपक्षले रेलिङ तोडेको, संसद अवरुद्ध गरेको त सुनिएको थियो, अब सरकारका मुखिया, मन्त्री, भाइभारदार, हुक्के चम्चे सबै सडकमा आएको दुर्लभ दृष्य हामीले हेर्न पाइरहेका छौं । यसअर्थमा हामी भाग्यमानी हौं ।
दश दश वर्षमा सरकार फेरिएका छन् । राणाविरोधी जयतु संस्कृतम्का अगुवा, १५ सालका सांसद अच्यूतराज रेग्मी, सत्यमोहन जोशी जस्ता मानिसहरुले जीन्दगीमा कतिथरी शासन व्यवस्था हेरे ? यसो गम्नुस् त । राणा शासन, मातृका, वीपी, पंचायत, बहुदल, गणतन्त्र, चारैथरी राजा, नयाँ महाराजा सबैको शासन हेरेका यी बूढाहरु तीनछक होलान् यसबखत ।
कोही बोलेका बोल्यैछन् । कोही चुप्पी साँधेर बसेका छन् । बोल्नपर्ने सुवास नेम्वाङहरु चुपचाप छन् । कति सकस होला बिचरालाई यो मौनता साँध्न । नबोलीकन खुरुखुरु पाँच वर्ष गरिखाउ भनेर सिंहासनमा मुकुट भिराइदिएर राखेका खड्ग प्रसाद ठट्टा गर्दै हिंडेका छन् । वल्लो कोठामा बसेका बिरामी खड्ग प्रसाद पल्लो कोठामा बसेका कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताको अनुहार समेत हेर्न गएनन्, बिरामी छु भनेर । पार्टी कार्यालयमा असुरक्षित भए । छतछतमा कुकुर डुलाए । बन्दुकधारीलाई घुमाएर मान्छे तर्साए । अहिले चुट्किला भन्दै देशदौडाहामा कुदाकुद गरेका छन् ।
यस्तो लाग्छ कि सब उल्टोपाल्टो भैरहेको छ मुलुकमा । जीन्दगीका उर्वर समय प्रचण्डले एमालेको सत्तोसराप गरेको सुनेर बिताइयो । ओलीले माओवादीको खेदो खनेको सुनेर बिताइयो । चारजना केटाहरु गुलेली लिएर जंगल पसेछन् भनेर माओवादीलाई उल्लीबिल्ली पारे उ बेला । प्रचण्डले पनि दलालका पनि महादलाल भनेर सिंगै एमालेको खेदो खने । दुवैथरीका पत्रिका, मान्छे, मुखपत्र सबै सबै पढियो । समयले बाँकटे हान्दै अजिब किनारमा ल्याएर दुवैलाई छोडेको छ । अहिले प्रचण्डलाई सूर्य चिन्ह नभई भएको छैन । ओलीलाई जनयुद्धको माया लागेर लडाकुहरुलाई अँगालो हाल्दै घ्वाँघ्वाँ रुन मन लाग्ने भएको छ ।
अस्तिसम्म यो दुनियाँमा देउता भन्ने क्वै छ भने त्यो मार्क्स हो भन्थे ओली । शपथ खाने बेलामा इश्वरका नाममा शपथ खान पनि उनलाई मार्क्सको दाह्रीले छेक्यो । अहिले नियमित सामान्य आराधना हुने बाहेकको शुक्रपक्षको बेथितिमा समेत उनी पशुपति पुगेर पूजा गर्न भ्याए । यो राजनीतिमा धर्म घुसेको हो या धर्ममा राजनीति घुसेको हो ? मान्छेहरुलाई ओलीले पूरै कन्फ्यूज बनाइदिएका छन् । अब उनलाई लाखौं रुपियाँको सुनको माला शिवलिंगमा लगाइदिने चाहनाको गण्डकी बगेको छ उनको मनभित्र । मोहनचन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनालीहरु चित खाँदै यो सब हेरिरहेका छन् । बा त भख्खर वृद्ध हुन थाल्नु भएकोछ । म कहाँ बूढो हुने ? भनेर भर्खरै चालीस पुग्दै गरेको महसुस गर्ने ओलीका अरु तमासा के के देख्न पाइने हो ? हाँस्यव्यँग्यका मनोज गजुरेलहरु पुरै फ्लप खाएर ओलीको निशुल्क मनोरन्जन लिन पाइने बेला आएको छ ।
प्रचण्ड पनि के कम । सत्ताको तानातानीमा प्रचण्ड । मधेशको नेतृत्वमा दमाली बाबुराम । यसो कुनामा चित्र बहादुर । जंगल र सदनको खाली भागमा मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल । अलि पल्तिर जंगलमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव । नख्खु कारागारमा
हेमन्तप्रकाश ओली र मणि थापाको भेट । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको गठजोड । यसो हेर्दा जताततै माओवादीले नै कब्जा गरेको जस्तो पो देखिन्छ । हिजो सँगै जनयुद्ध लडेका यी जम्मैलाई कुनै सुपरग्लूले एकै ठाउँ चिप्काइदियो भने के होला ? हनुमानहरुको जयजयकारका बीच सानोतिनो राजनीतिक अनुमान हामी जनताले पनि गर्न मिल्यो नि ? होइन र ?
कांग्रेस भलाद्मीहरुको पार्टी हो । उसले तोडफोड र हाट्हुटमा विश्वास गर्दैन । कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु दूबो जस्ता हुन् । ती ओइलाउँछन् तर मर्दैनन् । कम्युनिष्टहरु झैं आवेशमा आउने खालका तरल मानिस ती होइनन् । एकझर गतिलो पानी पर्नुपर्छ दूबो उम्रिहाल्छ । कम्युनिष्टहरु मिल्दैनन् भन्ने त कांग्रेसीलाई राम्रो हेक्का छ र त उनीहरुको अदालती देउवाप्रेम छचल्किएर आएको छ । रामचन्द्र बाजे एक्लै चिच्याएर के हुनु ? कोइरालाहरुको दाउ पनि चुनाव भन्दा अन्यत्र छैन । गोपालमान श्रेष्ठले खप्न नसकेर त्यसै भनेका होइनन्, काँग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छ भनेर ।
वीपी कोइरालाले भनेका कुरा किताबमा हुन् । वीपीलाई शालिक बनाएर कांग्रेसले उहिल्यै थन्कोमन्को लगाएको हो । यसको अगुवाइ गर्ने उनकै भाइ जीपी कोइराला हुन् । सशक्त प्रतिपक्ष हुन्थ्यो भने त कांग्रेसले एकस्वरले संविधानको मर्मका कुरा झिक्थ्यो । किनभने संविधान त हिजो भर्खर बनेको हो । संविधानको प्राणप्रतिष्ठामा कीर्तन गाउनेमा त यी कांग्रेसी पनि कम थिएनन् । तर अहँ, बालुटारको भूतले सबलाई झण्डू बनाइदियो । चुनाव भएदेखि न कांग्रेसले जित्ला । चुनावै नभए, जे होला होला टाइपको जुवाडे मानसिकतामा देउवाजी खडिखडाउ छन् । त्यसैले लोकलाजका निम्ति मात्रै चुनाव र संसदको बेलपत्र बोकेर कांग्रेसले घरी घरी नगर परिक्रमा गरिरहेकोछ ।
वास्तविकता जेसुकै भए पनि रेल र पानीजहाजको टिकट काट्न पठाएर ओलीले सही काम गरेका हुन् । मान्छे नै यतिविधि मूर्ख छन् त उनले टिकट नबेचेर के बेचुन् ? कपाल झरेर मुडुलो टाउको लिएर घुमेको गन्जोलाई काइँयो बेच्ने पट्टुराम हुन् ओली । मान्छेले पनि पत्याएर किनिदिए काइँयो त ओली सफल हुनेनै भए । आउँदो वर्षको यति गते रेल चढ्न टिकट लिएर बस्नू भनेर आफू बालुवाटार गए । मान्छेले न रेल देखे न जहाज । तै पनि मान्छे फेरि ताँती लागेर ओलीका गफमा भुलेका छन् । उनले पशुपतिमा भ्रमण के गरेका थिए, मान्छे हरिनाम जप्दै उनकै पछि लागेका छन् । नलागुन् पनि किन ? सत्ताभक्ति र शक्तिपुजन नेपालीको बानी नै हो ।
ओली फेरि एकपटक जसलाई जे चाहियो, त्यहि बाँड्ने अभियानमा सडकमा आइपुगेका छन् । प्रतिपक्षको सडक समेत कब्जा गरिरहेका छन् । ओलीले हिन्दूराज्य कायम र संघियता ढूस बनाइदिए भने ताली पिटेर स्वागत गर्ने हो भनेर नयाँ पुराना कांग्रेसीको ठूलो जमातले फेसबूकमा लेखिरहेको छ । सब गन्जागोल छ ।
जात्रा बल्ल शुरु भएकोछ हामीकहाँ । पंचायतको आखिरीतिर पनि पंचहरु खुबै र्याली निकाल्थे । स्कूले केटाकेटी, कर्मचारी,सेना,पुलिसको ठूलै भीड हुन्थ्यो । विरोधीहरु रातारात पर्चा बाँडेर हिंड्थे । ती थोरै थिए । ओलीले पनि खेलकूद परिषदमा खेलाडीहरुलाई बेला न कुबेला जम्मा गरेर २३ गते नारायणहिटी आउन उर्दी जारी गरेछन् । माघ १९ को कालो दिनमा सेनालाई सडकमा उतार्नु । उग्र, अराजक र असहिष्णु भएर गालीगलौजमा उत्रिनु । यी सबै दृष्यले हेर्दा ओलीले खेल बल्ल शुरु गरेको जस्तो देखिएको छ । यसमा अदालतले के भन्ने हो ? सब अदालतलाई प्रभावित पार्ने ध्याउन्नमा हल्लाखोर गरिरहेका देखिन्छन् । उग्र, अराजक हल्लामा ओली अगाडि छन् ।
हुन त हल्ला सुनेर ताली पिट्ने र चिच्याउने सेना अघि पछि हुँदासम्म हल्ला गर्नेले अझ हौसिएर हल्ला गर्छ । चुटकिला सुनाउँछ । अभिनय गर्छ । उफ्रन्छ । आफूले आफैलाई बिर्सन्छ । ओली त्यही मूडमा घुमिरहेकाछन् । तर बालुवाटारमा सब चिज छोडेर सडकमै उनी आउनु परेको होला ? राष्टपतिदेखि निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार सबलाई हल्लाइरहेका छन् । त्यहीं बसेर देखाइदिए हुने ।
अन्ततः ओलीकै शब्दमा यो सब देखाइदिनका लागि हो । गरिब जनताले त देखिरहेकै हुन् सत्तालाई वर्षौंदेखि । शायद प्रचण्ड र माधव नेपाललाई होला देखाइदिने । वर्षौंदेखि अघि पछि रहेका माधव नेपालले त धेरैकुरा देखेका होलान् । देख्न बाँकी प्रचण्डले पनि धेरैकुरा देखिसके । जनताले तोरीका फूल त देखिरहेकै छन् ।
सरकार हामीलाई हेर्न लाज भयो, यसरी देखाउने काम बन्द गरियोस् । हेर्न सकिएन ।